नयाँ कार किन्दा हेर्नु पर्ने मुख्य ५ कुरा
8:27 am, शुक्रबार, पुस ३०, २०७८
काठमाडौं । नयाँ कार किन्दा के कुरालाई महत्व दिएर छनोट गर्ने भन्ने विषयमा धेरै मानिसलाई ज्ञान नहुन सक्छ । तर, गाडी उत्पादकदेखि गाडीको मापन गर्ने कम्पनीसम्मले ध्यान दिने विषय बुझेर गाडी किन्न उपयुक्त मानिन्छ ।
विश्वभर अहिले १०० औं कार निर्माता कम्पनीहरु सक्रिय रहेका छन् । अझ पछिल्लो दिनमा विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढ्न थालेसँगै धेरै नयाँ ब्राण्डहरुको बजारमा प्रबेश भएको छ । कम्पनीहरु विशेषगरी नयाँ गाडी बनाउँदा आफुलाई पृथक बनाउने कोशिष गरिरहेका हुन्छन् ।
हरेक ब्राण्डलाई आफुले उत्पादन गरेको कार राम्रो भन्ने गरेको पाइन्छ । त्यसलाई छुट्टाउन गाडी किन्ने मानिसले नै धेरै विषयमा जानकारी राख्नु पर्छ । त्यसैले गाडी किन्दा मुख्य ५ कुरालाई ध्यानमा राखेर गाडी किन्दा उत्कृष्ट छनोट बन्न सक्छ । यहाँ उल्लेख भएका ५ विषयलाई २०÷२० अंकका दरले नम्बर दिएर अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरुले उत्कृष्ट कार छनोट गर्ने गरेको पाइन्छ ।
१. स्टाइलिसः गाडीको मुख्य आकर्षण नै यसको डिजाइन हो । उत्कृष्ट डिजाइन भएको कार निकै स्टाइलिस देखिन्छ । यसमा गाडीको डिजाइन, बनोटको गुणस्तर, यसको बाहिरी र भित्री डिजाइन जस्ता कुरा पर्छन् । हेडल्याम्प, टेलल्याम्प, ग्रिल, बम्पर र बडी डिजाइनले यसमा निकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ ।
२. पर्फमेन्सः गाडीको डिजाइनसँगै यसको पर्फमेन्स निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । तपाई किन्ने गाडीमा कस्तो इन्जिन दिइएको छ । त्यसको पावर र टर्क कस्तो छ । साथै, गाडीको सून्यदेखि ६० को स्पीड कति समयमा भेट्टाउन सक्छ । त्यसको टप स्पीड क्षमता जस्ता विषयमा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ ।
३. सहज र सजिलोः गाडी मानिसको घरपछि सबैभन्दा धेरै समय विताउने स्थान हो । त्यसैले गाडी किन्दा यसमा कति आरामदायी फिचर छन् भन्ने विषयमा जानकारी राख्नु पर्छ । यसमा दिइएको सिट, विभिन्न स्टोरेज स्पेश, बुट स्पेश जस्ता कुरा राम्रोसँग बुझ्नु पर्छ ।
४. सुरक्षा फिचरः गाडीमा यात्रा गर्नु सधैँ जोखिमपूर्ण मानिन्छ । त्यसले गाडी दुर्घटना भइहालेमा चालक र यात्रुको लागि के कस्ता सुरक्षा फिचर उपलब्ध छन् भन्ने जानकारी राख्नु पर्छ । विशेषत एबीएस, एयरव्याग जस्ता सामान्य फिचर अनिर्वाय भएपनि ब्रेक एसिस्ट, व्लाइन्ड स्पर्ट मोनिटरिङ, क्रुज कन्ट्रोल, स्पीड वार्निङ जस्ता फिचर हेर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
५. माइलेजः गाडी किन्नु र चलाउनुसँगै निकै महत्वपूर्ण विषय माइलेज हो । अहिले विश्वभर ठूला गाडी उत्पादन गर्ने कम्पनीले पनि इन्जिनको साइज घटाउँदै लगेका छन् । यसको मतलव उनिहरुको उद्देश्य माइलेज धेरै बनाउनु हो । माइलेज धेरै दिने कारको संचालन खर्च पनि कम हुने भएकोले यसमा विचार गर्नु पर्छ ।